I-Action Action kunye neMimiselo kaMongameli
Imiba Inkqubo Yezomthetho yase-US
Ukusetyenziswa kwezenzo ezilawulayo ngumongameli wase-United States wahlolwa ngokugqithiseleyo ngexesha likaBarack Obama emibini kwiofisi. Kodwa abagxeki abaninzi abazange baqonde ngokucacileyo inkcazo yezenzo ezilawulayo kunye nokwahlukana kunye nemiyalelo yesigqeba esisemthethweni.
U-Obama wakhupha ezininzi izenzo ezinokuthi zenzelwe ukukhusela ubundlobongela bombundu ngoJanuwari 2016, ukuzalisekisa enye yezinto eziphambili ze-ajenda . Uninzi lweengxelo zabezindaba ziphosakele zichaze iziphakamiso zomgaqo-nkqubo njengezikhokelo ezisemthethweni ezisemthethweni, ezizikhokelo ezisemthethweni ezivela kumongameli kwi-arhente yolawulo.
Ulawulo luka-Obama, nangona kunjalo, luchaze iziphakamiso njengezenzo ezilawulayo . Kwaye ezo zenzo ezilawulayo-ezivela kwimvelaphi yendawo yonke ihlola umntu ozama ukuthenga izibhamu, ukubuyisela ukuvinjelwa kwezixhobo zokuhlaselwa kwezempi , nokuqhekeka kwiintlobo zokuthengwa kwezibhamu ngabantu abazimisele ukuzithengisa izigwenxa-azenzi nto iinqununu zokulawula isisindo.
Oku kulandelayo kuchaza ukuba zeziphi iziganeko ezilawulayo kunye nokuba ziqhathaniswa njani nomyalelo olawulayo.
Amanyathelo amagosa ayiphakamiso engafanelekanga okanye ihamba ngumongameli. Ixesha elilawulayo lezenzo ngokwayo lingaqondakali kwaye lingasetyenziselwa ukuchaza malunga nantoni na umongameli ebiza iCongress okanye ukulawula kwakhe ukwenza. Kodwa amaninzi amanyathelo okulawula ayithwali mthethweni. Abo bakwenza ngokwenene ukubeka umgaqo-nkqubo bangenakulungiswa yizinkundla okanye bahlaziywe ngumthetho ogqitywe yiCongress.
Amanyathelo olawulo olulawulayo kunye nomyalelo olawulayo asinakutshintshana.
Iimyalelo zolawulo zibophelela ngokusemthethweni kwaye zipapashwe kwiRejista ye-Federal, nangona iyakwazi ukuguqulwa yinkantolo kunye neCongress.
Indlela efanelekileyo yokucinga ngezenzo ezilawulayo yoluhlu lweminqweno yemigaqo umongameli angathanda ukuyibona.
Xa Iimpawu zoLawulo ziSebenzisiwe endaweni yeeNkundla zoLawulo
AbaMongameli bayakuvumela ukusetyenziswa kwezenzo zokulawula ezingenanto zokukhawuleza xa lo mbandela ungqubuzana okanye ucebile.
Umzekelo, u-Obama wayeqikelele ngokucokisekileyo ukusetyenziswa kwakhe kwezenzo zokulawula ngobundlobongela basebundini kwaye wagqiba ngokuchasana nokukhupha izigunyaziso zomthetho ngokusebenzisa i-oda ezilawulayo, eziza kuhambelana nenjongo yomthetho weCongress kwaye zibeka umngcipheko abameli bamacandelo omabini.
Iimpawu eziLawulayo kunye neMemorandlela eLawulayo
Izenzo eziphezulu zikwahluke kwiimemorandula ezilawulayo. Imemorandlela esiphezulu ifana nemigqaliselo elawulayo yokuba baphethe ubunzima bomthetho bavumela umongameli ukuba awalathise amagosa karhulumente kunye nee-arhente. Kodwa imemorandula esebenzayo ayifakwanga kwiRejista yeSithili ngaphandle kokuba umongameli anqume imigaqo "yokusebenza ngokubanzi kunye nempembelelo yomthetho."
Ukusetyenziswa kweZenzo eziLawulayo ngabanye abaMongameli
U-Obama wayengumongameli wokuqala wanamhlanje ukusebenzisa iziganeko eziphezulu esikhundleni senkundla yesigqeba okanye imemorandula esebenzayo.
Ukugxeka kwezenzo eziLawulayo
Abagxeki bachaza ukusetyenziswa kuka-Obama kwezenzo zokulawula njengongqongqo lwamagunya akhe omongameli kunye nomzamo ongavumelani nomgaqo-siseko wokugqithisa igatsha lezomthetho, nangona uninzi lwezenzo ezilawulayo azizange zithwale ubunzima bomthetho.
Abanye abaqaphelisayo bathi u-Obama "ungumlawuli wecawa" okanye "umtyholi" kwaye wathi wayesebenza "umbuso."
USen u-Marco Rubio, waseRiphabhuliki evela eFlorida owayengumongameli wokhetho ngo-2016, wathi u-Obama "wayisebenzisa kakubi amandla akhe ngokumisela iipolisi zakhe ngegunya lokulawula esikhundleni sokuba avunywe kwiCongress."
USihlalo weKomiti yamaRiphabliki kaZwelonke kunye noMongameli weNdlu ye-White House, uMongameli uDonald Trump, uReince Priebus, wabiza ukusetyenziswa kuka-Obama kwezenzo ezilawulayo njengento "yesigqeba sokulawula amandla." U-Priebus uthi: "Wayekhupha umlomo kumalungelo ethu omgaqo-siseko, kodwa wenza izenzo ezingayigxininisi iSilungiso sesi-2 kunye nenkqubo yomthetho ." Urhulumente omelayo uthetha ukunika abantu ilizwi;
Kodwa nangona i-White House ye-Obama yavuma ukuba ininzi yezenzo zesigqeba azizange zithwale ubunzima bomthetho.
Nakhu okuthethwa ngabaphathi ngexesha lolawulo lwezenzo ezi-23: "Nangona uMongameli Obama uzasayinela iiNkqubo eziPhezulu ezingama-23 namhlanje eziza kunceda ukugcina abantwana bethu bekhuselekile, wayecacile ukuba akanako kwaye akafanele asebenze yodwa. kwiCroatia. "
Ngokumalunga nee-Attorneys zase-United States
Ngokumalunga ne-US Federal Court System
Schenck eUnited States
Imbali kaWilliam Rehnquist
ISebe loBulungisa loRhulumente waseMelika
Isiqhumiso seNyanga epheleleyo